EYASENTLANGO 34 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYASENTLANGO 34EYASENTLAN ... 34
Imida yelizwe laseKanana
341*UNdikhoyo wanika uMosis 2le miyalelo, wathi makayigqithisele kumaSirayeli, athi: “Nantsi ke imida yelizwe laseKanana endinipha lona. 3Umda wangezantsi uya kusuka kwintlango iZin, ubhijele kumda wase-Edom. Ngasempuma uya kuthatha kumazantsi oLwandle oluFileyo, 4uhle ujonge kwinkalo yeAkrabhim, utyhutyhumeze ungene eZin, uyokuthi gaa ngeKadeshe-bhaneya. Ukuphuma apho uya kujonga emantla-ntshona, uye eHazare-adare, uphumele eAzemon, 5apho uya kujika, ujonge kwiintili zemida yeJiputa, uyokuma ngolwandle olukhulu.Oko kukuthi “uLwandle lweMeditera”
6“Ngasentshona umda uya kuba lulwandle olukhulu.
7“Ngasentla umda uya kusuka kulwandle olukhulu, uye kurheca intaba iHore, 8uye kuthi xhaxhe kwinkalo yeHamati; uze ke uye kurheca iZedada 9neZifron, uye kuthi gaa ngeHazare-enan.
10“Owasempuma uya kuphuma eHazare-enan, uye kuthi xhaxhe ngeShefam. 11Uya kuhla uye eRibhela kwimpuma yeAyin, utyhutyhumeze kwiinduli ezikwimpuma yonxweme loLwandle lwaseGalili; 12uze ke wenjenjeya ukuhla ngomlambo iJordan, uye kuthi gaa ngoLwandle oluFileyo.
“Yomine ke le yimida yelizwe lenu.”
13UMosis ke waxelela amaSirayeli, wathi: “Nâlo ke ilizwe eniza kulizuza *ngamaqashiso, ilizwe elabelwe izindlu ezilithoba ezinesiqingatha *nguNdikhoyo.Ntlango 26:54-56 14-15Ke zona izindlu zikaRubhen, uGadi, kunye nesiqingatha sikaManase, zisifumene isabelo sazo ngokwemizi yazo ngaphesheya kwimpuma yeJordan malunga neJeriko.”Yosh 14:1-5
16*UNdikhoyo wayalela uMosis, wathi: 17“Umbingeleli uElazare noYoshuwa unyana kaNune ngabo abaya kwabela amaSirayeli umhlaba. 18Ngokunjalo ke khetha inkokheli ibe nye kwindlu nganye bancedise. 19-28Nanga ke amagama eenkokheli ezo:
KwaJuda uKalebhi unyana kaJefune
KwaSimon uShemuweli unyana ka-Amihudi
KwaBhenjamin uElidade unyana kaKiselon
KwaDan uBhuki unyana kaJogeli
KwaManase kaJosefu uHaniyeli unyana kaEfodi
KwaEfrayim kaJosefu uKemuweli unyana kaShiftan
KwaZebhulon uElizafan unyana kaParnaki
KwaIsakare uPaltiyeli unyana ka-Azana
Kwa-Ashere uAbhihudi unyana kaShelomi
KwaNafetali uPedayeli unyana ka-Amihudi.”
29Nango ke amadoda âmiswa nguNdikhoyo ukuba abele amaSirayeli umhlaba kwelaseKanana.